के तपाई मेकअप शुरुआती हुनुहुन्छ? यी मुहिको हभ्स जाँच गर्नुहोस् - मेक अप गर्नुहोस्
के तपाई मेकअप शुरुआती हुनुहुन्छ? यी मुहिको हभ्स जाँच गर्नुहोस्
Are You Makeup Beginner
के तपाईं मेकअपको शक्तिको नयाँ प्रशंसक हुनुहुन्छ? सुन्दरता को संसार एक पेचीदा ठाउँ हो, जति यो रूपान्तरण र सशक्त छ। यस असंख्य संसारमा शुरुवात हुनु उत्पादन र विविधताको स variety्ख्याको लागि थोरै डरलाग्दो र भ्रामक हुन सक्छ (त्यहाँ कुनै गुनासो छैन!)। सुरुमा चीजहरू सरल राख्नको लागि, मेकअप-हभ्समा फोकस गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई एक्का गर्नुहोस् र थप जटिल चीजहरूमा जानुहोस्। हामीले तपाइँलाई मेकअप उत्पादनहरूको एक सूची मिल्यो जुन तपाइँले तपाइँको मेकअप साहसिक कार्य सुरू गर्न किक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी यहाँ जान्छौं!
एक श्रृंगार हुनुपर्छ? ठ्याक्कै, अझ बढि, सूचीको शीर्षमा। तपाईहरु मध्ये कतिले सोच्दै हुनुपर्दछ कि कुनै दिमागमा बिरामी नभएको आधार के हो त्यस्ता सूचीमा। जहाँसम्म, मान्छेले उनीहरूको जगसँग खराब नै हुन्छन् उनीहरूको छाया हो। यो धारणामा जोड दिन सकिदैन कि यो सुनिश्चित गर्नु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले सहि छालाको छाया छान्नु हुन्छ र केहि हल्का हुँदैन। न केवल यसले तपाईंलाई केक-वाई फिनिश दिन्छ, तर यो प्राकृतिक नै पनि देखिंदैन।
यदि तपाईं कोही हुनुहुन्छ जो अउ प्रकृति स्वरूप खान्नुहुन्छ, त्यसोभए तपाईंले ओठको लाठाहरू खाडल बनाउनु पर्नेछ र ओठको आवरण मार्गमा जानुहोस्। टिन्ट्स मात्र धेरै प्राकृतिक देखिन्छन्, उनीहरूले तपाईंको लिपिक जस्तो नभई तपाईंको अनुहारलाई शक्तिशाली बनाउँदैनन् जुन प्राय: तपाईंको अनुहारको अन्य भागहरूबाट लिन्छन्। यसका साथै टिप्स लामो समय सम्म रहन्छ र तपाईको ओठलाई चाक्ली बनावट नदिनुहोस्।
आश्चर्यचकित कार्य नगर्नुहोस्! हाइलाइटर यो सूचीको एक हिस्सा हुनुपर्‍यो। चम्किरहेको छालालाई कसले माया गर्दैन? हामी सबै, हैन? किन त्यसो गर्छन र बदलामा केहि सोध्न को लागी केहि चीज हैन? नाटकीय, हामी जान्दछौं! तर त्यो के हाइलाइटरले ल्याउँछ - नाटक, रोशनी, प्राकृतिक देखिन्छ चमक, र आफ्नो अनुहार को राम्रो सुविधाहरु मा ध्यान ल्याउनुहोस्।
आँखा - आँखा, तपाईं आफ्नो ओठ टिन्ट, ढाँचा संग अनुहार, हाइलाइटर संग गाल कवच अब कभर भयो। मस्कराले मात्र तपाईलाई ठूलो, लामो पल्टो दिउँदैन, तर तपाईंको आँखा ठूलो र फराकिलो देखिन्छ। हाम्रो लागि, कोहल वा एक eyeliner अघि, मस्करा जाने आँखा चीज हो।
यो पनि पढ्नुहोस्: Tips सुझावहरू तपाईको मेकअप गल्तीहरूलाई सजिलोसँग फिक्स गर्न
तपाईंको बारेमा सबै: तपाईंको 2021 आर्सेनल यहाँ छ!
छोलेको स्वास्थ्य लाभहरू + एक स्वादिष्ट हम्मस रेसिपी
दिन:: एफडीसीआई x लकमे फेशन वीक २०२१
तपाइँको वार्डरोबलाई यी मोती शैलीहरूको साथमा पोश ट्वीस्ट दिनुहोस्
एक वायरलेस किबोर्ड वा तार सहितको कीबोर्ड?
भिनेश फोगाट ब्याग दुई हप्तामा दोस्रो गोल्ड, विश्व नम्बर १
छाला नियमहरु: तेल छाला हेरचाह सल्लाह तपाईले अनुसरण गर्नु पर्छ
रमाइलो, ग्लैमरस र ट्रेंडी ज्वेलरीका लागि ओआरएको डिजायर संग्रह संकलन गर्नुहोस्
किन तपाई वसन्त मा जेल सफाईकर्ताहरु को उपयोग गर्नु पर्छ
विज्ञ कुराकानी: जीवन बीमा बनाम स्वास्थ्य बीमा
तपाइँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाइँको भावनाहरु प्रतिशोधित छैन?
बेकिंग सोडा अनुहारको लागि सुरक्षित छ
अनुहारको लागि सजिलो सौन्दर्य सल्लाह
कपाल झर्ने र ड्यान्ड्रफको लागि घरेलु उपचार
पेटको बोसो घटाउन व्यायाम
कसरी गम्भीर कपाल झर्ने रोक्न
गणतंत्र दिवस समारोह महामारीको बिचमा कसरी हुनेछ
आछोको साथ समकालीन ट्रेंड-ट्रडिशन फ्यूजनको विश्व प्रविष्ट गर्नुहोस्
कसरी आफ्नो अनुहारमा ग्राम आटा प्रयोग गर्ने
स्पष्ट छालाका लागि M बिहान मदिरा
आइकनिक डिज्नी प्रिन्सेसहरू मिया एक्स डिस्ने द्वारा नयाँ संग्रहमा प्रतीकात्मक